App -ka rasmiga ah ee Walaalka Weyn ayaa ku soo laabtay si uu u kabo bandhigga dhabta ah | Wararka IPhone
Walaalka weyn shaki kuma jiro show TV lagu muransan yahay macnaha in aysan badanaa keenin tixgelin la'aan: ama wax badan ayaad jeceshahay ama waad neceb tahay. Anaguna waxaan nahay dhinaca aan nahay, waxa aan la inkiri karin waxay tahay inay kusocoto labaatan nuqul (toddobo iyo toban xilligan), taas oo macnaheedu yahay in barnaamijku uu kusii socdo heer la aqbali karo si faa iido loogu yeesho sidaas, iyo dabcan, ka raac barnaamij rasmi ah.
2 Is dhexgalka
Soo jiidashada ugu weyn ee barnaamijka Walaal Weyn Sida iska cad waa suurtagalnimada in guriga lagu arko 24 saacadood maalintii iyada oo loo marayo mobilka, wax la sameeyo iyada oo aan dhibaato jirin illaa inta isku xidhkayagu uu wanaagsan yahay ama aan hayno xog aan xadidnayn. Laga soo bilaabo shirkadda wax soo saarka waxay umuuqataa inay fiiro gaar ah uleeyihiin hakadka kujira daabicadihii hore waxayna sameeyeen dadaal ah inay ka dhigaan khibradaha adeegsadaha socodka ugu fiican.
Intaa waxaa dheer, barnaamijku wuxuu bixiyaa suurtagalnimada in la arko galas, soo koobid iyo doodo adigoon taaban telefishanka iyo dalabka laftiisa, iyadoo sii kordheysa baahinta daawashada barnaamijka. Marka lagu daro wax kasta oo aan ku daawan karno qaab muuqaal ah, laga bilaabo arjiga waxaan sidoo kale aqrin karnaa wararka oo aan la falgeli karnaa shabakadaha bulshada ee barnaamijka, kuwaas oo joogitaankoodu ku saleysan yahay Twitter iyo Facebook.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu sarreeya ee Walaalka Weyn waa isdhexgalka daawadayaasha barnaamijka, oo ah arjiga aan si buuxda u matalnay, maaddaama aan la macaamili karno barnaamijka si toos ah oo dabcan go'aan ka gaari karno haddii tartame la eryo ama uusan ku jirin codkeenna, dhammaantood iyadoon loo adeegsanin SMS-ka qadiimiga ah ee maalintoodii Waxay ahaayeen oo caan ku ah go'aaminta mustaqbalka tartameyaasha (iyo in ay wali firfircoon yihiin haddii aan door bidno habkaas codbixinta).
Kuwa ku cusub barnaamijka, Qaybta tartamayaasha, Maaddaama ay na siiso aragti iyaga ka mid ah taas oo aan si dhakhso leh ula xiriiri karno magaca iyo waji u raaci karno barnaamijka si macquul ah.
Codsiga Weyn ee Weyn gabi ahaanba waa bilaash kumana jiraan wax iibsasho nooc kasta ha ahaadeene, wax dhinaca kale ka yara yaaban ka imanaya Telecinco iyo sumcaddeeda caanka ah ee arimahan. Sidaas darteed waa codsi lama huraan ah haddii aad jeceshahay Walaalka Weyn, laakiin isla mar ahaantaana ah codsi gebi ahaanba la qaybin karo haddii aadan dan yar ka lahayn bandhigga dhabta ah ee Telecinco.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Rasmiga rasmiga ah ee barnaamijka 'Big Brother' ayaa ku soo laabtay si loo buuxiyo bandhigga dhabta ah
Barnaamijkaasi wuu neceb yahay aniga iyo xitaa in ka badan dadka daawada. #Dadka aan nolol lahayn
Mafia III: Rivals, waa bedelka moobiilka ee ciyaarta Console ee cajiibka ah